Myanmar People Magazine (http://www.people.com.mm/) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Lifestyle Website Myanmar People Magazine (http://www.people.com.mm/)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖတ်အများဆုံး နာမည်ကြီး မဂ္ဂဇင်းများထဲမှ တစ်ခုသည် မြန်မာ people မဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ people မဂ္ဂဇင်းသည် မြန်မာ apple user များအတွက် iphone application ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးထားသည့်အပြင် Kindle Version ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် မိမိရဲ့ Tablet ထဲမှ လွယ်လွယ်ကူကူ E-Book အနေနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ people မဂ္ဂဇင်းသည် မြန်မာနိုင်တွင် ခေတ်စားနေသော ဖက်ရှင်၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များကို အဓိကထားရေးသားသော lifestyle magazine ဖြစ်ပါသည်။ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓာတ်ပုံများအပြင် ဗွီဒီယိုဖိုင်များကိုလည်း အင်တာနက်ပေါ်တွင် you tube မှ တဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊
ကိုရီးယားနိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များအကြောင်းကို စုံလင်စွာ ဖော်ပြပေးပါသည့်အပြင် အနုပညာရှင်များ၏ အလန်းဇယားဓာတ်ပုံများနှင့် အင်တာဗျူးလေးတွေပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ipad, tablet များထဲတွင် မရှိမဖြစ်ထည့်ထားသင့်သည့် magazine app တစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။
Myanmar People Magazine is one of the most famous Lifestyle Magazine in Myanmar. Myanmar People Magazine can also be read online. Apart from introducing Myanmar People Magazine iPhone application for Apple users, Myanmar People Magazine also distribute its magazine in Kindle Version making it easier to read it on Tablets. Myanmar People Magazine mainly writes about trending fashion updates in Myanmar and Myanmar traditions. Audience can not only read the articles and see the exquisite Myanmar artists’ photos on Myanmar People Magazine’s website but can also check out the video files on youtube. It provides stylish photos, exquisite interviews and updates about popular Myanmar artists, Korean artists, and several other artists from all over the world. Myanmar People Magazine is one of the most must-have online magazines for your mobile.
Previous articleMyanmar Food (http://www.myanmars.net/myanmar-food/)
Next articleMeeMaLee (http://www.meemalee.com/p/burmese-recipes.html)